संस्कार परिवर्तन कसरी गर्ने ? | Purna Oli Free songs
Home / प्रवचन संग्रह / संस्कार परिवर्तन कसरी गर्ने ?
Posted by: Purna Oli in प्रवचन संग्रह July 31, 2016	0 96 Views
हाम्रो सारा पुरुषार्थ नै संस्कार बदल्नको लागि हो । ज्ञानमा आउनुभन्दा पहिले हाम्रो संस्कार आसुरी थियो, तमोगुणी थियो, देह-अभिमानबाट पैदा भएको थियो । जन्मजन्मान्तर हामीहरु देह-अभिमानबाट वशीभूत भएर कर्म गर्दै आएका थियौँ र उस्तै हाम्रो खराब संस्कार बनेको थियो । त्यसबाट हामी दुःखी अशान्त थियौँ । दुःख र अशान्ति किन थियो ? हाम्रो कर्म असल थिएन, किनकि हाम्रो संस्कार असल थिएन । यस संस्कारले हामीलाई बाध्य बनाएर यसो गर्न लगाउँथ्यो । बाबाले आएर हामीलाई बताउनुभयो कि ‘बच्चा हो, यो संस्कार तिम्रो होइन, तिम्रो संस्कार त सर्वगुण सम्पन्न सोह्रकला सम्पूर्ण हो ।’ बाबाले भन्नुभयो, ‘ज्ञान योगबाट पुरानो संस्कार बदलेर फेरि आफ्नो असली संस्कार ल्याउन सक्छौ । यो देह-अभिमानको संस्कार आफ्नो स्वाभाविक संस्कार होइन, तिम्रो स्वाभाविक संस्कार हो – पवित्रता र शान्ति ।’ कसैकसैले भन्छन्, ‘भाइ, यो त मेरो नेचर हो ।’ बाबा भन्नुहुन्छ, ‘यो तिम्रो नेचर होइन, देहअभिमानमा आएर तिमीले यो नेचरलाई अपनाएका हौ ।’ अब यी संस्कारहरुलाई बदल्नुछ र आफ्नो स्वाभाविक संस्कारलाई भर्नुछ । पुरानो संस्कारलाई बदल्नको लागि कुन कुन कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ? बाबाले त अथाह युक्तिहरु र ज्ञान बिन्दू दिनुभएको छ तर म यहाँ चारपाँच कुरा बताउँछु, जसलाई दिनदिनै आफूमा भए नभएको देख्नुपर्छ ।
बाबा भन्नुहुन्छ, ‘बच्चा हो, नलेजफुल ज्ञानपूर्ण बन ।’ यदि हामीलाई थाहा भयो कि बाटोमा खाल्डाहरु छन्, काँडाहरु छन्, चट्टानहरु छन्, हामी सम्हालिएर हिड्नुपर्छ । यदि हामी जानेर पनि संहालिन सकेनौँ भने हामी नलेजफूल नै भएनौँ । हामी सम्झन्छौँ कि यो व्यक्ति लडाकू छ, झगडालु छ भने उसंग संभालिएर हिड्नुपर्छ र संभालिएर बोल्नुपर्छ । यदि हामी त्यसको स्वभावलाई, संस्कारलाई जानेर पनि उसकै जस्तो गर्दै हिँड्छौँ भने जानेर पनि अनजान र ज्ञानी भएर पनि अज्ञानी भइहाल्यौँ । यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, ‘बच्चा हो, नलेजफुल बन ।’ आफ्नो र बाबाको बारेमा जस्तो छ, त्यस्तै जानेका छौँ, त्यसरी आफ्नो सम्पर्कमा आउनेवाला व्यक्ति जे जस्तो छ, त्यो जानेर सोही अनुसार चलौँ । यदि हामी यो कुरा बुझेर पनि, जानेर पनि चलेनौँ भने हामीले आफैलाई धोखा दिइरहेका छौँ र आफैलाई ठक्कर खुवाइरहेका हुनेछौँ । यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, ‘बच्चा हो, नलेजफूल बन ।’ नलेजफूल बनेर आफूले आफैलाई सुरक्षित राख्नेछौ । सबको संस्कार जानेर उनीहरुको साथ असल व्यवहार गरेर प्रेम र शान्तिपूर्वक रहनेछौ ।
२ बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो संस्कार परिवर्तन गर्नको लागि सबैले पुरुषार्थ गरिरहेका छन् । अन्तसम्म पुरुषार्थ गरिरहनेछन् । सम्पूर्ण त अन्तिममा बन्नेछन् । यसैले यो नसोच कि यो त यति ज्ञानी छ, यसमा पनि त यति यति कमजोरीहरु छन्- यस्तो नसोच । यो सोच कि सबैले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्, उनीहरुले पनि आफ्नो संस्कार बदल्ने कोशिस गरिरहेका छन् । कसैमा पनि सम्पूर्णताको आशा नराख । यसैले हामीले यो सोचौँ कि म विश्व कल्याणी हुँ । सारा विश्व त बदलिएको छैन, तसर्थ मैले पनि विश्व कल्याणको कार्य गर्नुछ । यदि तपाईँको सम्पर्कमा अथवा सम्बन्धमा कुनै खराब संस्कारवाला आयो भने उबाट दुःखी वा अपशोच मान्नुको साटो तपाईँ यो सम्झनुहोस् अर्थात आफूमा यो परिवर्तन गर्नुहोस् कि बाबाले मलाई विश्व कल्याणी टाइटल दिनुभएको छ, मैले यसको पनि कल्याण गर्नुछ । यो मेरो सम्पर्कमा यसर्थ आएको छ कि मैले नै यसको कल्याण गर्नुछ । त्यो जतिसुकै खराब संस्कारवाला भए पनि ऊबाट दुःखी वा हैरान हुनुको साटो यो सोच कि बाबाले यसलाई मेरो सम्पर्कमा यसर्थ पठाउनुभएको छ कि मैले नै यसको कल्याण गरुँ र यसको संस्कार बदलूँ ।
३ बाबा भन्नुहुन्छ कि सत्ययुगमा हरेक पद अलग अलग हुनेछ नम्बरवार हुनेछ । किन हुनेछ ? किनकि संगमयुगमा हरेकले अलग अलग पुरुषार्थ गरेका छन्, नम्बरवार पुरुषार्थ गरेका छन् र अन्त्यमा उनीहरुको अलग स्थिति हुन पुग्यो । यसैले सबैले आआफ्नो संस्कारअनुसार चल्नुपर्नेछ । बाबा भन्नुहुन्छ ‘सत्ययुगमा तिम्रो एकअर्कोमा अथाह सम्मान मिल्नेछ, सबबाट सत्कार मिल्नेछ । यहाँसम्म कि प्रकृति जीवजन्तु पशुपन्छी सबले तिमीलाई सत्कार दिनेछन् । कसैले कसैलाई दुःख दिनेछैनन् । सत्कार उहाँ कसरी मिल्ला ? कुन आधारले मिल्ला ? यहाँ दिएको भए उहाँ मिल्ला । यो नियम नै छ, जस्तो गर्छौ, त्यस्तै पाउँछौ । यहाँ जतिजति अरुलाई सम्मान दिइन्छ, त्यति नै उहाँ गएर मिल्छ । यदि तपाईँसामु पानी पिउनको लागि कोही प्यासी व्यक्ति आयो भने उसलाई राजोचित भोजन दिएर उसको प्यास मेटिएला ? मेटिँदैन । त्यसरी नै यदि तपाईँबाट कसैले सम्मान र सत्कारको आशा राखेको छ भने के गर्नु पर्ला ? भलै उसले तपाईँलाई अपमानित गरिरहेको छ भने पनि तपाईँ उसलाई सम्मान र सत्कार दिएर उसको प्यास मेटाइदिनोस् । भविष्यको लागि तपाईँको खातामा यो सम्मान र सत्कार जम्मा हुनेछ, किनकि त्यो मान्छे सम्मानको भोको छ । तपाईँ उसलाई चिन्नुहुन्छ कि ऊ कस्तो मान्छे हो भनेर, तैपनि तपाईँलाई ठूलै मानेर, यदि तपाईँबाट सम्मान मागेको छ वा चाहेको छ भने उसलाई चिनेर पनि सम्मान दिनुहोस् किनकि ऊ सम्मानकै भोको छ । अतः तपाईँ सत्ययुगमा सर्वसम्मान चाहनुहुन्छ भने अहिले नै सबैलाई सम्मान दिनुहोस् । त्यो मान्छे सानोभन्दा सानो भए पनि उसलाई सम्मान दिनुहोस् ।
४ बाबा भन्नुहुन्छ, ‘सबैलाई सहयोग देऊ ।’ अरुले तपाईँलाई सहयोग गरोस् कि नगरोस् तपाईँ उसलाई सहयोग गर्नोस्, किनकि ऊ पनि ईश्वरकै बच्चा हो । उसले पनि जे गरिरहेको छ, त्यो ईश्वरीय कार्य हो । ईश्वर हाम्रा मातापिता हुनुहुन्छ । त्यो कार्य उसले गरोस् कि मैले गरुँ, दुवैका पिता परमात्माको कार्य नै हो । यसैले हरेक बाबाका बच्चालाई उसको ईश्वरीय कार्यमा तपाईँ पूरा सहयोग गर्नुहोस् । संस्कार परिवर्तनबाट नै संसार परिवर्तन हुन्छ । यसैले संस्कार परिवर्तनको लागि तिब्र पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ । आफूमा कुनचाँहि पुरानो संस्कार बाँकी छ ? त्यो चेक गर्नुहोस् र आफ्नो जुन मूल संस्कार हो, त्यसलाई भर्दै जानुहोस् ।
५ भक्तिमार्गमा कसैमा कुनै कडा संस्कार छ भने त्यसलाई निकाल्नको लागि के गरिन्छ ? व्रत बसिन्छ, उपवास गरिन्छ, प्रण गरिन्छ भगवानको सामुन्ने । भक्तहरुको जस्तै हामीहरुले उपवास तथा हठ गर्नुपर्दैन, तर हामीले दृढ संकल्प गर्नुपर्छ कि मैले त्यस संस्कारको प्रयोग नगरुँ भनेर, अनि त्यस कडा संस्कारलाई तपाईँ बाबामा अर्पित गरिदिनुहोस्, दान गरिदिनुहोस् । यस प्रकार तिब्र पुरुषार्थबाट नै आफ्नो कडा संस्कारलाई मेटाउन सकिन्छ र दैवी संस्कारलाई अपनाउन सकिन्छ ।
Previous: भगवानको हात र साथ
Next: दीलको केही कुराहरु